IBM Inonongedza Kuchengetedza uye Zvokuchengetedza Zvishandiso zveiyo Quantum Computing | Linux Vakapindwa muropa
IBM inotarisira kuvharira uye ekuchengetedza maturusi emakomputa ehuwandu
Quantum komputa inguva yemberi yakawandas tech giants, kusanganisira China yeMicrosoft, Google, IBM, uye Alibaba.
Nguva Izvo zvinoziviswa kuti iyi tekinoroji inotyaira kufambira mberi kwakawanda munzvimbo dzinoverengeka IT, inogona zvakare kukanganisa kuchengetedza kweakavanzika data. IMB, semuenzaniso, inogutsikana iyo compum yakawanda ichaunza shanduko huru uye ichapa nzira dzekunzvenga zviri nyore dziviriro dziripo. Zvazviri, yakapihwa Yakachengeteka Quantum Cryptography neMuvhuro uye inoratidza kuti makambani agadzirire ramangwana.
Zve IBM, quantum komputa ndiyo mhinduro kuchinetso chakakosha:
Kana matekinoroji, akadai saWatson, parizvino achimhanya pamakomputa echinyakare anogona kubatsira kuwana mapatani uye ruzivo rwakavanzwa muhuwandu hwakawanda hwedata riripo, makomputa equantum achapa mhinduro kumatambudziko akakosha ayo mapatani asingawanikwe, kungave nekuti data haripo kana nekuti mikana yaunofanira kutsvaga kuti uwane mhinduro yakanyanya kukura zvekuti haugone kuitiswa nemakomputa akajairwa.
Zvisinei,, kutya kweiyi tekinoroji kunowanikwa mukukanganisa kwainogona kuve nako pasimba rekunyorera algorithms. Ino vimbisa kugadzirisa matambudziko matsva, kukunda makomputa makuru, uye inogona kushandiswa kuputsa zvirinyore encryption uye dziviriro yedata.
Muchokwadi, kunyorera kwazvino kunoenderana nesisitimu yekunyora nhamba dzekutanga. Sekureva kwenyanzvi, iyi nzira inonakidza, nekuti kune maviri akapihwa manhamba ekutanga, zvisinei nehukuru hwayo, kuvawanza kuti vawane chigadzirwa chavo kuri nyore.
Mukupesana, kutsvaga zvakakosha zvinhu zveiyi nhamba kunonetsa uye nekukurumidza kunowedzera kuomesa sezvo huwandu hunogadzirwa hunowedzera. Parizvino, hapana nzira yekukurumidza yakawanikwa yekugadzirisa iro dambudziko rekutanga. Asi izvi hazvireve kuti zvinogona kutaurwa kuti hazvigoneke kuvabata. Muna 1994, nyanzvi yemasvomhu yekuAmerica inonzi Peter Shor yakagadzira nzira yekukurumidza uye inoshanda yekutsvaga izvo zvakakosha zvehuwandu. Dambudziko chete nderekuti, kune huwandu hukuru, nzira yake, inonzi iyo Shor algorithm, inoda iyo quantum komputa kuti ishande.
Ehezve, iyo Webhu payakatanga muna 1994, kutaura nezvequantum makomputa yaive yesainzi yekunyepedzera.
Asi muna 2001, vaongorori veBMM vakazivisa kuti vakanga vavaka imwe, vakaigadzirira nealgorithm yaShor, uye vakaishandisa kuti vaone kuti zvinhu gumi neshanu zvaive 15 ne3 Kubva ipapo, kufambira mberi kukuru kwave kuchiitwa mundima ye quantum. Achiziva nezvematambudziko aya uye njodzi ingangoisa kumabhizinesi nedata ravo, Big Blue ikozvino inopa mhinduro dzinobvumidza mabhizinesi kutarisira nyaya idzi uye vanokurudzira kuti vatange kugadzirira ramangwana.
Kuti udzivise kukanganisa kwekuchengeteka ye data kuenda kumberi, mune chirevo Muvhuro, IBM Cloud yakazivisa kuti inopa encryption tekinoroji ramangwana-humbowo hwehuwandu hwekushandisa komputa. Mune mamwe mazwi, IBM inopa itsva gore komputa masevhisi uye quantum encryption rutsigiro yeakakosha manejimendi uye mashandisirwo ekushandisa pane IBM Cloud. Aya matsva maficha anobatsira vanobatirana uye vatengi kuchengetedza aripo data akachengeteka uye kugadzirira kwekutyisidzira mune ramangwana.
Iko kugona kutsva inosanganisira kutsigira kweQuantum Safe Cryptography, IBM Key Protect, uye Hyper Protect Crypto yakawedzerwa masevhisi eBM Cloud. Aya maficha matsva anofanirwa kugonesa vatengi veBig Blue nevatambi kuti vadzivirire zvirinani data ravo mugore, chengetedza makiyi avo ekuvharira akachengetedzeka muhupenyu hwayo hwese, uye chengetedza data mukufamba pane IBM Cloud. Kubheja kweBM ndiko kugona kubatanidza kuziva-kwayo mukuchengeteka uye nemuchadenga gore pamwe nekutsvaga kwaro muquantum computing.
Mune ruzivo, IBM yakazivisa kuti Quantum Safe Cryptography inoshandisa yakavhurika zviyero uye yakavhurika sosi matekinoroji kugadzira nekushandisa huwandu hwekuchengetedza algorithms semadhata e data pakati pebhizimusi uye gore.
Vati izvi zvinodzora njodzi yekuti vabiridzi vanogona kutora data rakanyorwa nhasi uye vorinyora gare gare, sekufambiswa kwekomputa yakawanda. Chechipiri, IBM Key Protect igore-rakavakirwa sevhisi iyo inobatsira kugadzirisa iyo lifecycle yeIBM Cloud masevhisi kana kunyorera makiyi ekushandisa-akagadzirwa vatengi
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » IBM inotarisira kuvharira uye ekuchengetedza maturusi emakomputa ehuwandu
URL mapfupi atoisa kare kuteedzera makuki
OpenZFS 2.0 inouya nerutsigiro rweFreeBSD, zstd nezvimwe